China iplastiki yokugaya (SPCE101) umzi-mveliso kunye nababoneleli |Jiuxing
ikhowudi yemveliso: SPCE101
Uhlobo: Isila seplastiki
Ukusetyenziswa: Ibhotile yeglasi okanye iibhotile zeplastiki (ezifana nebhotile yepepile, ibhotile yetyuwa, njl.njl)
Ukusebenza kakuhle kwitywina.
Umphumo omhle wokugaya.
Esi sila seplastiki sinokusetyenziswa kakhulu kwityuwa erhabaxa, iikhozo zepepile, iikhozo zepepile, njl.njlInevumba elimnandi.Kwelinye icala, imveliso isentsha ngakumbi, zibeke ekutyeni okuphekiweyo, ngoko ke izitya zimnandi kakhulu. Iimveliso ezibonelelwayo ziyilwe kwaye ziphuhliswe ngowona mgangatho uphezulu wemathiriyeli kunye nobuchwepheshe bamva nje.Iqela labavavanyi bomgangatho livavanya ezi mveliso kumalungiselelo omgangatho wokunikezela ngoluhlu lwasimahla.Ngaphandle koko, iimveliso zethu ezibonelelwayo ziyafumaneka ezinobungakanani obahlukeneyo ngamaxabiso afikelelekayo kubathengi abaxabisekileyo.
Izitayile zemveliso, iinkcukacha kunye nemibala zinokulungiswa ngokweemfuno zabathengi.Zonke iiplasitiki zethu zokusila zinokuthelekisa intamo yebhotile ngokugqibeleleyo, xa iikepusi zeplastiki zenziwe ngokwezifiso zixhomekeke kwibhotile.other than，Isila sethu seplastiki senziwe ngePC yodidi lokutya. izinto ezikrwada, zenza iimveliso zibe luhlaza ngakumbi kwaye zomelele.zonke iikepusi zethu zeplastiki zifumana umgangatho obanzi kunye novavanyo olusebenzayo.
Sinamava atyebileyo ekuveliseni iiplastic grinders, Sinenkqubo yokuvelisa ngokungqongqo, iR Professional & D kunye neqela lemveliso, emva koko, sinenkqubo yokuhlola engqongqo yoMgangatho, qinisekisa ukuba izisombululo zokuvalwa kweJiuxing ukupakisha unokumthemba.
Ngaphambili: icephe leplastiki (FPS802)
Okulandelayo: iplastiki yokugaya (SPCE102)
Iplastiki yePepper Grinder
Isigrisi sePlastiki yeTyuwa
iplastiki yokugaya (SPCE102)